I-Headliner: Yakha ii-Audiograms zePodcast yakho ukukhuthaza eNtlalweni | Martech Zone
I-Headliner: Yakha ii-Audiograms zePodcast yakho ukukhuthaza eNtlalweni
NgoLwesibini, Novemba 9, 2021 NgoLwesibini, Novemba 9, 2021 Douglas Karr
Ishishini le-podcast liyaqhubeka nokukhula kumashishini. Siyibonile impembelelo engakholelekiyo kuthotho lwepodcast esiye sanceda iinkampani ukuba zisungule - uninzi lungena lula kwipesenti ephezulu yeshishini labo ngenxa yokunqongophala kwezinye iindlela ezikhuphisanayo. IPodcasting sisitishi sokuthengisa esimangalisayo ngenxa yezizathu ezininzi:
Voice -Ibonelela ngamava asondeleleneyo nachukumisayo ngokwasemoyeni apho amathuba akho kunye nabathengi banokwakha ukuthembana kwaye balazi ibhrendi yakho buqu.
Ukugcinwa -sonke sifuna ukuncedisa abathengi bethu ukuba babe nempumelelo... ngoko ke ukuphuhlisa ithala leencwadi elivakalayo elibanceda basebenzise iimveliso zakho okanye babafundise ngeenkonzo zakho yeyona ndlela ilungileyo yokuseta okulindelekileyo, ukwakha ukuthembana, kunye nokuzuza impumelelo.
baqinisekiswa – Iinkampani zemveliso kunye nenkonzo zihlala zithetha ngeempawu zazo kunye nezibonelelo, kodwa azisoloko zibelana ngamabali abathengi bazo. Udliwano-ndlebe nomthengi yindlela entle yokwakha ulwazi kunye nokuthembela kuhlobo lwakho.
Ukwazisa -Udliwano-ndlebe nabaphembeleli kunye neenkokheli zeshishini kwipodcast yakho yindlela entle yokuthengisa iimveliso kunye neenkonzo zakho kunye nokwakha ubudlelwane nabantu abakhokela ishishini lakho.
Ukucingela -Ndenze udliwanondlebe nabantu abaliqela abanokuba ngabaxhasi bepodcast yam emva koko ndabasayina njengabathengi kwixesha elizayo. Ibe yindlela engakholelekiyo yokugqobhoza kwiintengiso… kwaye iluncedo macala.
Oko kuthethiweyo, ipodcasting inokuba nzima. Ukusuka ekurekhodeni, ukuhlela, ukuvelisa ii-intros/outros, hosting, syndicating... zonke ezi zithatha inzame. Siye sabelane a inqaku elibanzi kwixesha elidlulileyo kule nto. Kwaye… emva kokuba ipodcast yakho ipapashiwe, kufuneka uyikhuthaze! Enye indlela esebenza ngokumangalisayo yokwenza oku kukusebenzisa i i-audiogram.
I-audiogram yividiyo ebamba isandi sesandi ngokubonakalayo kwifayile yeaudio. I-Y-axis imele i-amplitude elinganiswa ngee-decibels kwaye i-X-axis imele i-frequency elinganiswe kwi-hertz.
Kwimithombo yeendaba zedijithali kunye neenjongo zokuthengisa, i-audiogram yifayile yevidiyo apho i-audio yakho idityaniswa kunye nemizobo ukuze ukwazi ukukhuthaza i-podcast yakho kwitshaneli yevidiyo efana ne-YouTube okanye uyifake kwijelo lentlalontle njenge-Twitter.
Ividiyo yentlalontle ivelisa i-1200% yezabelo ngaphezulu kunombhalo kunye nomxholo wemifanekiso edibeneyo.
Ukunyaniseka, ndothuswa kukuba amajelo ezentlalo kunye nevidiyo awanapapasho lwepodcast olwakhiwe ngokuthe ngqo kumaqonga abo ngale njongo… ke kufuneka sithembele kwizixhobo zomntu wesithathu ezifana Intloko.
Isihloko: UJika njani iPodcast ibe ziividiyo ekwabelwana ngazo
I-Headliner sisiqulatho sokuhlela kunye nokulawula iqonga lokwenza iividiyo ekwabelwana ngazo okanye ii-audiograms zepodcast yakho. Isixhobo sabo seVidiyo zePodcast ezizenzekelayo zineetemplates zevidiyo ye-podcast kwaye unokwenza ii-audiograms zepodcast yakho kwi-Headliner app mobile.
Iimpawu ze-Headliner zibandakanya
Iifom -Khawuleza ubambe umdla wabantu kwaye ubazise ukuba i-podcast idlala ngeaudio kunye nomnye wababonisi bethu bomsindo omangalisayo
IiVideos ezingenamkhawulo -Yandisa ipodcast yakho ngeevidiyo ezininzi njengoko ufuna, elungiselelwe ijelo ngalinye leendaba zosasazo
Isiqendu esipheleleyo -Papasha isiqendu sakho sonke sepodcast (iiyure ezi-2 ubuninzi) kwiYouTube kwaye ubandakanye abaphulaphuli abatsha
Ukukhutshelwa komsindo -Bhala ngokuzenzekelayo iaudiyo ukongeza amagama-ncazo kwiividiyo zakho ukwandisa ukubandakanyeka kunye nokufikeleleka
I-Transcription yevidiyo -I-headliner inokubhala ukusuka kwividiyo nayo! Ukuba unomxholo, singakunceda wongeze ii-captions
Audio Clipper -Khetha iiklip zeaudio yepodcast yakho elungiselelwe ngokugqibeleleyo kwijelo ngalinye lentlalo
Ubungakanani obuninzi -Thumela ngaphandle iividiyo zakho ngokobungakanani obufanelekileyo kwinethiwekhi yoluntu nganye nangaphaya
1080p Thumela ngaphandle -Jonga kakuhle kwizikrini ezinkulu nezincinci ezinevidiyo enenkcazo ephezulu
Uopopayi okubhaliweyo -Khetha kwiitoni zoopopayi besicatshulwa okanye uzenzele eyakho ukongeza umdla wokubonwayo kwiividiyo zakho
Zonke iintlobo zeMedia -Yongeza imifanekiso, iiklip zevidiyo, iaudiyo eyongezelelweyo, ii-GIFs, kunye nokunye kuyo nayiphi na iprojekthi
Iwijethi elungisiweyo -Ngaphakathi kwemizuzu, vumela iindwendwe zakho zesayithi indlela yokwenza ngokukhawuleza iividiyo ze-Headliner
Ukungena kwelinye -Yakhelwe iinginginya zamashishini, ivumela ukungena kweakhawunti ngaphandle komthungo kunye nokuvumelanisa iividiyo ezibuyela kwiCMS yakho.
Unxibelelaniso NgeAcast, Castos, SoundUp, Pinecast, blubrry, Libsyn, Descript, Fireside, Podigee, Stationist, Podiant, Casted, LaunchpadOne, Futuri, Podlink, Audioboom, Rivet, Podcastpage, Entercom, kunye nokunye.
Nanku umzekelo omhle weAudiogram ye-Headliner Podcast ebanjwe kuYouTube:
Eyona nto ingcono kakhulu, unokuqalisa Intloko simahla!
Isibhengezo: Ndisebenzisa ikhonkco lam lokudlulisela Intloko apho ndingafumana uhlaziyo lwasimahla ukuba uyabhalisa.
tags: 1080pi-acastikliphu yomsindoUkukhutshelwa komsindoiaudioboomi-audiogramibhlorryijulweI-CastosinkcazokomliloFuturindiyintlokokwenziwa kanjaniLaunchpadOnelibsynI-Pinecastiwijethi yepodcastIphepha lePodcastIpodiantPodigeeI-PodlinkRivetIsandiUpi-spareminUmbhexeshiumbhalo oopopayiUkukhutshelwa kwevidiyoifomyintoni i-audiogramyoutube